I-Swafield Hall, ifulethi elizimele eliseNingizimu ne-East wing - I-Airbnb
I-Swafield Hall, ifulethi elizimele eliseNingizimu ne-East wing
Swafield, England, i-United Kingdom
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Boris
Ngo-272 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Aga 23.
Amafulethi amabili amaholide aseduze komunye nomunye, ahlala phansi yonke indawo ephezulu ye-Swafield Hall enezindawo zangaphakathi ezinhle, izingadi ezinokuthula, inkundla ye-parkland nenkundla yethenisi. I-East & South Wing zombili zalungiswa kahle futhi zalala 6(7). Kunendawo yokudlela enabantu abangu-7 noma ungamema abantu abangafika kwabayi-16 ukuba bazodla isidlo sakusihlwa endaweni enkulu yama-Victorian Conservatory. Sebenzisa izoso, izingadi, utshani be-croquet, amatafula angaphandle, indawo yokuphumula. Nethezeka ku-hammock noma emabhentshini e-lime arbor e-Secret Garden.
I-South Wing iqukethe igumbi lokulala eliyinhloko / indawo yokuphumula (imishayo eveziwe, umbhede we-kingsize, indawo yomlilo yakudala, amafasitela angempela anama-shutter asekuqaleni), ikamelo lokulala, i-rollaway single bed kanye nekhishi elizinikele. I-East Wing itholakala engxenyeni endala yendlu yekhulu le-16 futhi iqukethe ikamelo lokulala elingu-20 sq. m elibukeka kahle, umbhede we-kingsize, imishayo ye-oki eveziwe yasekuqaleni, i-LED TV, i-antique chandelier. Igumbi lokugezela elikhulu eliwubukhazikhazi ngesitayela se-Victorian, elinebhavu lokuma lamahhala eduze kwefasitela, isihlalo esinyakazayo kanye ne-antique chandelier. Ungakwazi ukujabulela ukubuka okumangalisayo ku-parterre kanye notshani obukhulu ngenkathi ugeza.
Womabili amafulethi akwisitezi sesi-2 sendlu futhi aneminyango yokungena ekhiyekayo. I-conservatory iyatholakala ukuze isetshenziselwe ukudla.
I-wifi esheshayo – 272 Mbps
ubusuku obungu-7 e- Swafield
Imizana eseduze nale ndawo yiSwafield (1 mile), enebhula elidumile lendawo iTavern Tasty Meats neTrunch (1.7 miles) nesonto laseSt Botolph kanye neshibhini edumile ethi 'The Crown Inn'. Ingxenye ethakazelisa kakhulu ye-St Botolph e-Trunch i-canopy yayo yefonti eqoshwe ngokhuni ebabazekayo, okungenye yamakhenopi amane asekhona kulo lonke elaseNgilandi. Indawo yasogwini eseduze yi-Mundesley, enolwandle lwayo oluhle olunesihlabathi kanye nezindawo zobumnandi ezinhle (amamayela angu-2.9 ukuhamba/ukushayela). Eduze ungathola amanye amabhishi amahle kakhulu i-UK engawanikeza (Cromer 8 miles, Sheringham 13 miles) kanye neNorfolk Broads edumile (8 miles).
Idolobhana lezimakethe eliseduze laseNorth Walsham (amamayela angama-2.5) linezindawo zokudlela ezimbalwa, i-Waitrose yendawo kanye neSainburys.
Idolobhana lase-Swafield libe nokungena ku-Domesday Book ka-1085. Isonto lase-St Nicholas e-Swafield linesinye sezikrini ezimbalwa ezisele ze-Medieval Rood eNorfolk. Yakhiwa ngekhulu le-13 noma le-14 futhi yanwetshwa ngekhulu le-15. ISt Nicholas ihlezi ngokuziqhenya egqumeni futhi kunombono omuhle emaphandleni aseduze, okuhlanganisa nokubuka iSwafield Hall.
Ithrekhi kaloliwe yakudala enhle yengxenye esenyakatho yeNorfolk kanye neSuffolk Joint Railway iwuhambo lwemizuzu emi-5 nje ukusuka eSwafield Hall. Manje isiyindlela yomphakathi (ingxenye yendlela yezinyawo yasePaston Way) kanye nendawo yokulondoloza uvemvane. Ujantshi wesitimela wakhiwa ngekhulu le-19 nelama-20, nakuba ngeshwa ingxenye eyayixhumanisa iSwafield neNorth Walsham yavalwa ngo-1964. I-Pigney's Wood iyimizuzu engu-15 yokuhamba, iphethwe yiNorth Norfolk Community Woodland Trust futhi isebenza njengendawo yokufihla izimbali zasendle. , izimvemvane nezinyoni. Lesi siza sihlanganisa amahektha ayi-1.7 ehlathi elixubile elivuthiwe, amahektha angu-7.8 ehlathi elisha, indawo evulekile engamahektha angu-8.5 kanye namahektha angu-5.5 aphansi, indawo yotshani emanzi. Izihlahla ezingaphezu kuka-20,000 zezinhlobo ezingamashumi amane sezitshaliwe kusukela indawo yathengwa ngo-1992.
E-Swafield indlela yokuhamba egudla umzila wesitimela omdala inqamula umzila womsele. ISwafield ingesinye sezigodi ezimbalwa eNorfolk ezinomsele - INorth Walsham kanye neDilham Canal, okuwukuphela komsele eNorfolk. Umsele wakhiwa futhi wavulwa ngo-1826 futhi ungamakhilomitha angu-8.7 ubude futhi usuka e-Swafield Bridge uye enhlanganweni yoMfula i-Ant e-Smallburgh. Umsele wakhiwe ngezingidi eziba banzi kancane kunemisele eminingi e-UK ukuze uvumelane nokusetshenziswa kwama-Norfolk wherries, kungakho isithombe se-wherry kuphawu lwesigodi sase-Swafield.
Yiba nesikhathi sokuphumula uzulazula, noma uphumule kwelinye lamabhentshi futhi uthole izinyoni zendawo nezilwane zasendle.
Previously Chief Editor and Managing Director of the most read daily newspaper in Moscow (Russia), Boris got two higher education, first as a radio physicists and second as a theatre director. At the perestroika time he chose to work in the new born independent media business and achieved commercial success. Boris likes theatre and classical music, handicrafts, restoration and decorating, he is an avid gardener and Harley enthusiast.
In 2014 Boris quit his job in media business, which became too dependent politically, moved from Moscow to London and started looking for a restoration project.
"When we visited Norfolk and saw Swafield Hall for the first time the house definitely wasn’t in its best condition. It had been on the property market for a long time and nobody had lived there for 3 years. The roof was leaking, walls were cracked, some windows, doors and wooden constructions were rotten… It was crying out for TLC. But it was a beautiful, outstanding house with more than 4 centuries of history, great interiors and marvellous gardens. We said “definitely not” but returned here once, returned again, and finally decided to buy Swafield Hall, renovate it and restore it to its previous glory.
The renovation started in May 2015, and the work on Swafield Hall is now complete.
We are happy to share our love and passion for this beautiful historic house with our guests".
Previously Chief Editor and Managing Director of the most read daily newspaper in Moscow (Russia), Boris got two higher education, first as a radio physicists and second as a theat…
Ababungazi bazotholakala ukuze bathole iseluleko ngesikhathi uhlala.
Ungathola ulwazi ngomlando weBanga II esohlwini lwe-Swafield Hall kanye nokulungiswa kwakamuva kusizindalwazi se-Swafield Hall.
UBoris Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Swafield namaphethelo